နိုဘယ်လ်ဆုအတွက် သံတမန်ခရီး | Democratic Wave
Posted by Demo Wave , at 10:22 AM0comments
ဦးစိုးသိန်း စက်မှုဝန်ကြီး၏ နော်ဝေနိုင်ငံခရီးစဉ်သည် ကောင်းကျိုးပေးမလား၊ ဆိုးကျိုးပေးမလား၊ သမ္မတနှင့် ဦးအောင်မင်း၊ ဦးစိုးသိန်းတို့အတွက် အကျိုးကျေးဇူးကောင်းရနိုင်မည်။ မြန်မာပြည်သားတွေ အတွက် ကောင်းကျိုးမရနိုင်။ ဆိုးကျိုးသာရမည်။ မြန်မာဝန်ကြီးနှစ်ပါး နော်ဝေနိုင်ငံသို့ နှစ်လအတွင်း နှစ်ခေါက်သွားသည်။ မြန်မာပြည်အတွက် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အကူအညီ ရရေးဟု အကြောင်းပြလိမ့်မည်။ အမှန်က သမ္မတကြီး နိုဘယ်လ်ဆုရရေး သွားရောက်ကြိုးပမ်းခြင်းသာ ဖြစ်ဖို့များသည်။ နော်ဝေနိုင်ငံထက် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မည့် နိုင်ငံများစွာရှိသည်။ နော်ဝေနိုင်ငံထက် ငြိမ်းချမ်းရေးအကူအညီပေးနိုင်သည့် နိုငံများစွာရှိသည်။ ဘာလို့မသွားသလဲ? စဉ်းစားစရာရှိသည်။
နော်ဝေက နိုဘယ်လ်ဆုပေးနေသောနိုင်ငံမို့လား။ နိုဘယ်ဆုပေးရန် စာရင်းပြုစုသူမဟုတ်လား။ မကြာမီက အထင်ပေါ်ဆုံး၊ လူကြိုက်များတဲ့စာရင်းမှာ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့နာမည် ထည့်သွင်းကြေညာ ခံထားရပြီလေ။ နိုဘယ်လ်ဆုကိုလှမ်းမျှော်မှာပေါ့။ ဦးစိုးသိန်းခရီးစဉ်သည် ဒေါ်စုကြည် နော်ဝေခရီးစဉ်နှင့် ချိန်ကိုက်ဖြစ်နေသည်မှာလည်း တိုက်ဆိုင်ခြင်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါ။ အစီအစဉ်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်မှာ ဧကန် မလွဲပါ။ ဒေါ်စုကြည်၏အားကိုယူမည်၊ ဒေါ်စုကြည်ထောက်ခံချက်လိုမည်။ ဒီလိုစီစဉ်မှ သမ္မတကြီးအတွက် နိုဘယ်လ်ဆုစာရင်းဝင်ဖြစ်မည်။ ဦးစိုးသိန်းကလည်း အောင်သွယ်ကောင်းသည်။ အနောက်အုပ်စုကလည်း ပေးချင်ချင်၊ ဒီဖက်ကလည်း ရချင်ချင်နဲ့တော့ ဟန်ချက်ညီနေတာပဲ။
ဦးစိုးသိန်းတို့ကလည်း မျက်နှာရလိုသည် အနောက်နဲ့ မရမကဆက်ဆံလိုသည်။ အနည်းဆုံး အင်္ဂလန်မှာထားသော သူ့သားသမီများအတွက် အဆင်ချောနိုင်သည်။ သူ့သားသမီး (၂)ဦးက အင်္ဂလန် နိုင်ငံသားတောင်ခံယူထားသည်ဟု သိရသည်။ သို့သော် ဦးစိုးသိန်းက လျှို့ဝှက်ထားသည်။ ထပ်မံရနိုင် ဖွယ်ရာက သူတို့ပါ အနောက်အုပ်စုက သူကောင်းပြုနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ နိုဘယ်လ်ဆုနောက်ဆက်တွဲစာရင်း ၀င်လာနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့ပင် ၎င်းတို့ကြိုးပမ်းနေသည်မှာ အလွန်ရှင်းလှပါသည်။
ဦးစိုးသိန်းတို့အုပ်စုသည်ကား အနောက်အုပ်စု၏အလိုကျ ဘာမဆိုလုပ်တော့မည့်ဘ၀ ရောက်နေ ပေပြီ။ သူတို့သည် ပြန်နှုတ်မရနိုင်လောက်အောင် ကျွံနေပြီ။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သူ၊ တတ်ယောင်ကား တို့၏ လောဘဆန္ဒကို တားမရတော့ပါ။ သူတို့ဝန်းကျင်မှာ ၀ိုင်းရံနေသူများသည် သူတို့အား ကောင်းကောင်းကြိုးကိုင်ထားနိုင်ပြီလို့ ပြောရတော့မည်။ ဒီတော့ ဘာဖြစ်မှာလဲ။ သမ္မတကြီးနှင့် အနီးကပ် ရှိနေသူများကို အနောက်အုပ်စုလို့ခေါ်မလား? ၊ စီအိုင်အေလို့ခေါ်မလား? ၊ ထိုသူတို့တွေက လိုသလို အသုံး ပြုနိုင်သည်။ မြန်မာပြည်ဟာ ဒုတိယ ရုရှားအင်ပါယာပြိုကွဲသလိုဖြစ်မလား? ၊ ၁၉၄၈ ခု လွတ်လပ်ရေးရပြီး ၆၄ နှစ်ကြာနောက်ပိုင်းမှာ အနောက်အုပ်စု၏ သခင်ပေါင်းစုံကျွန်ဖြစ်မလား? ၊ တိုင်းရင်းသည်းစည်းလုံးမှု ပြန်ရခါနီးဆဲဆဲမှ တဖန် အစိတ်စိတ်ပြိုကွဲတော့မလား? ၊ တိုင်းပြည်နှင့်ပြည်သှု့အနာဂတ်ရေးသည် အလွန် စိုးရိမ်စရာဖြစ်တော့မည်။ အရှေ့၊ အနောက် နယ်မြေလွှမ်းမိုးနိုင်ရေးပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာတို့မြေစာပင်ဖြစ်တော့ မည့်ကိန်း ဆိုက်နေသည်။ ရှေးလူကြီးများထားခဲ့သော ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးဟာ သမိုင်းမှာကျန်ရစ် နေပေတော့မည်။